Waltajjiin marii hundeeffama “Fooramii Nyaataa” taa’amaa jira – Fana Broadcasting Corporate
Waltajjiin marii hundeeffama “Fooramii Nyaataa” taa’amaa jira
Finfinnee, Fulbaana 6, 2012 (FBC) – Waltajjiin marii hundeeffama “Fooramii Nyaataa” taa’amaa jira.
Fooramichi dhimma dhiyeessii fi raabsaa nyaataa irratti xiyyeeffaateet gaggeeffamaa jira.
Biiroo Qonnaa Naannoo Amaaraa, Biiroo Maallaqaa fi Tumsa Diinagdee naannoo Amaaraa, Ityoophiyaa Iskool Miil Iniisheetiiv, Alaayvi fi Traayvi waliin ta’uun kan hundeessaan, hundeeffama fooramii nyaataa fi waltajjii marii qorannoo jalqabaa Bahiir Daar Hoteela Avaant Biluu Naaylitti gaggeefamaa jira.
Waltajjii marii kana irratti kana argamaan Gorsaa Dhimmoota Seeraa Preezidaantii obbo Marhaa Tsaadiq Makonnin qabeenyi naannicha hamma eeyyameen garaagarummaa sanyii , saalaa, amantii fi bifaa tokko malee mirga nyaata argachuu kan danda’u ta’uu, biyyattiin waliigalteewwaan idila addunyaa fudhateekan jirtuu fi heera mootummaan taa’e jiru ta’u himaniiru.
Nyaanni dhimmoota garaa guutuu qofa otuu hin taane, ulfina dhala namaa waliin walqabata kan jedhan obbo Marhaan dhiyeessiin nyaataa beela irraa bilisa ta’uu qofa otuu hin taane, raabsaa haqaa kan ilaallatu waan ta’eef fooramii nyaataa hundeessuun faayidaa qaba jedhaniiru.
Daayreektarri Ityoophiyaa Iskool Miil Iniisheetiivii fi hundeessituun Fooramii Nyaataa aadde Fire’aalam Shibbabaaw nyaanni biyya tokkoof dhimma xiinsammuuti, keesuumattu daa’imni nyaataan rakkatu jiraachuu hin qabu jedhan jechuun AMMA gabaase.
Yaa’iin waggaa damee fayyaa gaggeeffamaa ture xumurame
Qorichi talaallii kaansarii ulaa gadaameessaa rabsame
Yaa’iin waggaa damee fayyaa gaggeeffamaa jira
Ambulaansonni 200 hoospitaalotaaf dabarfaman